ဘနာဇီယာဘူတို - ပါကစ္စတန်၏ဟောင်းများန်ကြီးချုပ်
ဘနာဇီယာဘူတိုတောင်အာရှရဲ့အကြီးအကနိုင်ငံရေးမင်းဆက်များထီးတဦးတည်းအတွက်နေရူး / ဂန္ဒီမင်းဆက်၏ပါကစ္စတန်ရဲ့ညီမျှသို့မွေးဖွားခဲ့သည် အိန္ဒိယ ။ သူမ၏ဖခင်၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့သည် ပါကစ္စတန် 1973 ကနေ 1977 ခုနှစ်မှ 1971 ခုနှစ်ကနေ 1973 ခုနှစ်ရန်, နှင့်ဝန်ကြီးချုပ်; သူ၏အဘ, အလှည့်၌, လွတ်လပ်ရေးနှင့်ရှေ့တော်၌မင်းသားပြည်နယ်၏ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည် အိန္ဒိယ Partition ခွဲ ။
ပါကစ္စတန်ရှိနိုင်ငံရေး, သို့သော်, အန္တရာယ်များတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံး၌, ဘနာဇီယာ, သူမ၏ဖခင်နှင့်သူမ၏ညီအစ်ကိုတွေရဲ့နှစ်ဦးစလုံးပြင်းထန်စွာသေဆုံးလိမ့်မယ်။
ဘနာဇီယာဘူတိုရာချိ, ပါကစ္စတန်, Zulfikar Ali ကဘူတိုနှင့် Begum Nusrat Ispahani ၏ပထမကလေးကဇွန်လ 21, 1953 ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ Nusrat ထံမှခဲ့ အီရန် နှင့်လေ့ကျင့် ရှီအာအစ္စလာမ်ဘာသာ သူမ၏ခင်ပွန်း (နှင့်အများဆုံးကိုအခြားပါကစ္စတန်) ဆွန်နီအစ္စလာမ်ဘာသာကျင့်သုံးနေစဉ်, ။ သူတို့ကဆွန်နီအဖြစ်ပေမယ့်တစ်ဦးစိတ်-ပွင့်လင်းခြင်းနှင့် Non-doctrinaire ဖက်ရှင်အတွက်ဘနာဇီယာနဲ့သူတို့ရဲ့အခြားကလေးများကြီးပြင်း။
Murtaza (1954 ခုနှစ်ဖွား), သမီး Sanam (1957 ခုနှစ်ဖွား) နှင့် Shahnawaz (1958 ခုနှစ်ဖွား): အဆိုပါစုံတွဲသည်နောက်ပိုင်းတွင်သားနှစ်ယောက်နှင့်အခြားသမီးမယ်။ ကြီးကလေးကအဖြစ်, ဘနာဇီယာမခွဲခြားဘဲသူမ၏ကျား၏, သူမ၏လေ့လာမှုများအတွက်အလွန်ကောင်းသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။
ဘနာဇီယာတက်ရောက်ခဲ့သည်ထို့နောက်အထက်တန်းကျောင်းမှတဆင့်ချိအတွက်ကျောင်းသို့သွား၏ Radcliffe ကောလိပ် (ယခုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် သူမနှိုင်းယှဉ်အစိုးရကိုလေ့လာရှိရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်) ။ ဘူတိုအကြာတွင်ဘော်စတွန်အတွက်သူမ၏အတွေ့အကြုံကိုဒီမိုကရေစီ၏တန်ခိုးအတွက်သူမ၏ယုံကြည်ချက် reconfirmed ကပြောသည်။
1973 ခုနှစ်တွင် Radcliffe မှဘွဲ့ရပြီးနောက်, ဘနာဇီယာဘူတိုဂရိတ်ဗြိတိန်အတွက်အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ကလေ့လာနေအများအပြားထပ်တိုးနှစ်ပေါင်းနေခဲ့ရသည်။
သူမသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်သံတမန်ရေး, စီးပွားရေး, ဒဿနနှင့်နိုင်ငံရေးတွင်သင်တန်းများ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုယူ။
အင်္ဂလန်မှာဘနာဇီယာရဲ့လေ့လာမှုတွေသို့လေးနှစ်, ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုအတွက်မိမိအဘ၏အစိုးရလှဲတော်မူ၏။ အဆိုပါအာဏာသိမ်းမှုခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုဟာမက် Zia-ul-Haq, ပါကစ္စတန်အပေါ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့် Zulfikar Ali ကဘူတိုလက်သံကိုတက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုစွဲချက်အပေါ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ရသည်။
သူမနှင့်သူမ၏အစ်ကို Murtaza သူတို့ရဲ့ထောင်ဒဏ်အဘ၏ထောက်ခံမှုအတွက်အများပြည်သူထင်မြင်ချက်ကိုဝိုင်းရံကြဖို့ရန် 18 လအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်အဘယ်မှာရှိဘနာဇီယာ, အိမ်ပြန်လေ၏။ ပါကစ္စတန်၏တရားရုံးချုပ်ကလည်းလူသတ်မှုကျူးလွန်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများ Zulfikar Ali ကဘူတိုပြစ်မှုထင်ရှားခြင်းနှင့်ကြိုးဆွဲချသေဖို့သူ့ကိုထောင်ဒဏ်။
ကြောင့်သူတို့ရဲ့အဘ၏ကိုယ်စားသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုရန်, ဘနာဇီယာနှင့် Murtaza ချွတ်နှင့်ရက်နေ့တွင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားခဲ့သည်။ ဧပြီလ 4, 1979 ၏ Zulfikar ရဲ့ designated ကွပ်မျက်နေ့စွဲပိုမိုနီးကပ်စွာဆွဲငင်နှင့်အမျှဘနာဇီယာ, သူမ၏မိခင်နှင့်သူမ၏အငယ်မောင်နှမအားလုံးရဲတပ်၌ဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံတကာကဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်နေသော်လည်းအထွေထွေ Zia ရဲ့အစိုးရဧပြီလ4ရက်နေ့တွင် Zulfikar Ali ကဘူတိုဆွဲထား, 1979 ဘနာဇီယာ, သူမ၏အစ်ကိုနှင့်သူမ၏မိခင်အချိန်တွင်ထောင်ထဲမှာရှိကြ၏နှင့်အစ္စလာမ့်ဥပဒေနှင့်အညီသင်္ချိုင်းဘို့ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ဆင်ထားရန်ခွင့်မပြုခဲ့ကြ ။
ဘူတိုရဲ့ပါကစ္စတန်ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ပါတီ (ပီပီပီ) ထိုနွေဦးဒေသခံရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသည့်အခါ, Zia အမျိုးသားရေးရွေးကောက်ပွဲများဖျက်သိမ်းနှင့် Larkana အတွက်အကျဉ်းထောင်ဖို့ရာချိ၏ခန့် 460 ကီလိုမီတာ (285 မိုင်) မြောက်ဘက်ဘူတိုမိသားစုတစ်စု၏ကျန်ရစ်သူအဖွဲ့ဝင်များစေလွှတ်ခဲ့သည်။
လာမယ့်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းဘနာဇီယာဘူတိုထောင်ထဲမှာသို့မဟုတ်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြစ်စေကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ သူမ၏အဆိုးဆုံးအတွေ့အကြုံကိုသူမနွေရာသီအပူ၏အဆိုးဆုံးအပါအဝင် 1981 ၏ခြောက်လများအတွက်တိုက်ပိတ်ခံရတှငျကငျြးပခဲ့ရာ Sukkur, မှာသဲကန္တာရထောင်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘနာဇီယာလုံလုံလောက်လောက် Sukkur ထောင်မှာသူမ၏အသုံးအနှုန်းကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်ပြီးတာနဲ့ Zia ရဲ့အစိုးရတခါပိုပြီး Larkana မှဖြစ်လျှင်, ချိဗဟိုထောင်မှသူမ၏ကျောစေလွှတ်လျက်, နောက်ကျောချိဖို့နေအိမ်အကျယ်ချုပ်။ ထိုအတောအတွင်းမှာလည်း Sukkur မှာကျင်းပခဲ့သောသူမ၏မိခင်, အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါရှိတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘနာဇီယာသူ့ကိုယ်သူခွဲစိတ်လိုအပ်သည့်အတွင်းစိတ်နားကိုပြဿနာတီထွင်ခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖိအားသူတို့ကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရှာပါကစ္စတန်စွန့်ခွာခွင့်ပြုပါရန် Zia များအတွက်တပ်ဆင်ထားသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်တစ်နေ့မှထောင်ဒဏ်တစ်ဦးပုံစံကနေဘူတိုမိသားစုရွေ့လျား၏ခြောက်နှစ်အကြာတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Zia သူတို့ကိုကုသမှုအရနိုင်ရန်အတွက်ပြည်ပရောက်သို့သွားကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဘနာဇီယာဘူတိုနှင့်သူမ၏မိခင်ကသူတို့ရဲ့ Self-ချမှတ်ဆေးဘက်ပြည်ပရောက်စတင် 1984 ဇန်နဝါရီလလန်ဒန်သို့သွားကြ၏။
အဖြစ်မကြာမီဘနာဇီယာရဲ့စကားကိုနားထောငျပြဿနာကုစားခဲ့သည်အဖြစ်သူမကလူသိရှင်ကြား Zia စစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ထောက်ခံမှစတင်ခဲ့သည်။
အဖြစ်ဆိုးတစ်မိသားစုပျော်ပွဲစားပြီးနောက်ဇူလိုင်လ 18, 1985 ရက်တွင်တစ်ကြိမ်ပိုပြီးမိသားစုတို့ဘနာဇီယာရဲ့အငယ်ဆုံးအစ်ကို, 27 နှစ်အရွယ် Shah က Nawaz ဘူတို, ပြင်သစ်၌သူ၏အိမ်တွင်အဆိပ်၏သေခံတော်မူ၏။ သူ့မိသားစုကသူ့အာဖဂန်မင်းသမီးလေးဇနီး, Rehana, အ Zia စစ်အစိုးရ၏ behest မှာ Shah က Nawaz အသတ်ခံခဲ့ကွောငျးယုံကြည်သည် ဖြစ်. , ပြင်သစ်ရဲအခြို့သောအချိန်တို့အတွက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူမကျင်းပပေမယ့်မရှိစွဲချက်အစဉ်အဆက်သူမ၏ဆန့်ကျင်ယူဆောင်ခဲ့ကြသည်။
အိမ်ထောင်ရေး & မိသားစုဘဝ
အဆိုပါသူမ၏ဆွေမျိုးနီးစပ်၏လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများနှင့်ဘနာဇီယာရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသညျးအအလုပ်များနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအချိန်ဇယားအကြား, သူမယောက်ျားချိန်းတွေ့သို့မဟုတ်တွေ့ဆုံဘို့အချိန်မရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့သူမဟာသူမအသက် 30 ထဲသို့ဝင်ရသောအချိန်အသုံးပြုပုံဘနာဇီယာဘူတိုကသူလက်ထပ်ဘယ်တော့မှမယ်လို့ယူဆရန်စတင်ခဲ့; နိုင်ငံရေးသူမ၏ဘဝအလုပ်နှင့်သာချစ်ခြင်းမေတ္တာပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်သူမ၏မိသားစုကတခြားစိတ်ကူးများရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခုကအန်တီတစ်ဦးသူချင်းငျဒီနှင့်ဆင်းသက်မိသားစု, Asif Ali Zardari အမည်ရှိလူငယ်တစ်ဦးသည်လူမြို့၏အဘို့ထောက်ခံ။ ဘနာဇီယာပင်ပထမဦးဆုံးမှာသူ့ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ငြင်းဆန်ပေမယ့်သူမ၏မိသားစုနှင့်သူ၏ကကြိုးပမ်းပြီးနောက်, အိမ်ထောင်ရေး (စီစဉ်ပေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြောင်းကိုဘနာဇီယာရဲ့အမျိုးသမီးရှိတယျလို့ရှိနေသော်လည်း) စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာတစျခုဖွစျသညျ, နှင့်စုံတွဲကလေးသုံးယောက်ရှိခဲ့ပါတယ် - သား Bilawal (1988 ဖွား) နှင့်သမီးနှစ်ယောက်, Bakhtawar (1990 ဖွားမြင်) နှင့် Aseefa (1993 ဖွား) ။ သူတို့ကပိုကြီးတဲ့မိသားစုများအတွက်မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် Asif ဇာဒါရီခုနစ်နှစ်များအတွက်အကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကပိုကလေးများရှိသည်ဖို့နိုင်ခြင်းရှိကြ၏။
အရှိကိုသြဂုတ်လ 17, 1988 တွင်ဘူတို, မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုထံမှမျက်နှာသာလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ပါကစ္စတန်အာနိုး Lewis က Raphel ဖို့အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုဟာမက် Zia-ul-Haq နှင့်သူ၏ထိပ်တန်းစစ်တပ်တပ်မှူးများအများအပြားသယ်ဆောင်လာသည့်ကို C-130, ပါကစ္စတန်၏ပန်ဂျပ်ဒေသအတွက်, Bahawalpur အနီးပျက်ကျသွားသည်။ သီအိုရီရက်များ, အိန္ဒိယဒုံးပျံသပိတ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသတ်သေရှေ့ပြေးပါဝင်သည်သော်လည်းအဘယ်သူမျှမပြတ်သားအကြောင်းမရှိအစဉ်အဆက်, တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းသောစက်မှုပျက်ကွက်သို့သော်အများဆုံးဖွယ်ရှိအကြောင်းမရှိပုံရသည်။
Zia ရဲ့မမျှော်လင့်ဘဲအသေခံဘနာဇီယာနှင့်, နိုဝင်ဘာ 16 အောင်ပွဲမှ 1988 ခုနှစ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲပီပီပီဦးဆောင်လမ်းပြရန်သူမ၏မိခင်အတှကျလမျးရှင်းလင်း။ ဘနာဇီယာမသာဒီဇင်ဘာလ 2, 1988 ရက်တွင်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဒသမဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သူမကပါကစ္စတန်ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်, ဒါပေမယ့်လည်းခေတ်သစ်ကာလ၌မွတ်စလင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဦးဆောင်လမ်းပြရန်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ပိုပြီးရိုးရာသို့မဟုတ်အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံရေးသမားများ rankled ရာ, လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဘူတိုအနေဖြင့်ဆိုဗီယက်နှင့်အမေရိကန်ရုပ်သိမ်းအပါအဝင်ရုံးအတွက်သူမ၏ပထမဦးဆုံးအသက်တမ်း, စဉ်အတွင်းနိုင်ငံတကာမူဝါဒကိုပြဿနာများ၏နံပါတ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန် နှင့်ရရှိလာတဲ့ပရမ်းပတာ။ ဘူတိုထွက်ရောက်ရှိ အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ်ရာဂျစ်ဂန္ဒီနဲ့ကောငျးတဲ့အလုပ်လုပ်ကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်, ဒါပေမယ့်သူကရုံးထဲကမဲပေး, ပြီးတော့အားဖြင့်လုပ်ကြံခံရသောအခါပဏာမပျက်ကွက် တမီလ်ကျား 1991 ခုနှစ်။
ပြီးသားအာဖဂန်နစ္စတန်ရှိအခွအေနအားဖြင့်တင်းမာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အတူပါကစ္စတန်ရဲ့ဆက်ဆံရေး၏ပြဿနာကျော် 1990 ခုနှစ်မှာလုံးဝကိုဖဲ့ နျူကလီးယားလက်နက် ။
ဘနာဇီယာဘူတိုခိုင်မြဲစွာအိန္ဒိယပြီးသား 1974 ခုနှစ်တွင်နျူကလီးယားဗုံးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့စဉ်ကတည်းကပါကစ္စတန်, တစ်ဦးယုံကြည်နျူကလီးယားအဟန့်လိုအပ်ကြောင်းယုံကြည်သည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဘူတိုလည်း ultra-ရှေးရိုးစွဲပါကစ္စတန်သမ္မတ Ghulam Ishaq Khan ကနှင့်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်း၌သူ၏မဟာမိတ်များအားနည်းသွားစေရန် assiduously အလုပ်လုပ်။ သို့သော် Khan ကပြင်းထန်စွာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၏ကိစ္စရပ်များအပေါ်ဘနာဇီယာရဲ့ထိရောက်မှုကိုကန့်သတ်ထားတဲ့ပါလီမန်လုပ်ရပ်များ, ကျော်ဗီတိုအာဏာပါဝါရှိခဲ့ပါတယ်။
1990 နိုဝင်ဘာလမှာတော့ Khan ကယင်းချုပ် Ministership ကနေဘနာဇီယာဘူတိုပယ်ချခဲ့သည်နှင့်အသစ်ရွေးကောက်ပွဲများတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူမသည်ပါကစ္စတန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖို့အဌမပြင်ဆင်ရေးအောက်မှာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်နီပိုတစ်စန်နှင့်အတူတရားစွဲဆိုခဲ့သည်; ဘူတိုအမြဲတမ်းစွဲချက်သက်သက်သာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသည်ဟုဆိုသည်။
ဘနာဇီယာဘူတိုငါးနှစ်အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းမှဒုတိယတန်းသို့တန်းဆင်းခဲ့ရစဉ်ကွန်ဆာဗေးတစ်လွှတ်တော်အမတ် Nawaz Sharif ကသစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Sharif ကလည်းအဌမပြင်ဆင်ရေးပယ်ဖျက်ရန်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ, နိုင်ငံတော်သမ္မတ Ghulam Ishaq Khan ကသူသုံးနှစ်ကအစောပိုင်းကဘူတိုရဲ့အစိုးရမှပြုသမျှအတိုင်း, 1993 ခုနှစ်တွင်သူ၏အစိုးရမှတ်မိဖို့ကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ဘူတိုနှင့် Sharif က 1993 ခုနှစ်တွင်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Khan ကဖြုတ်ချဖို့တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
1993 အောက်တိုဘာလမှာတော့ဘနာဇီယာဘူတိုရဲ့ PPP ပါတီပါလီမန်အမတ်နေရာတစ်ဗဟုတယ်နှင့်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ဘူတိုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သမ္မတသူမ၏လက်ကောက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း, ဖာရွတ်ခ် Leghari, Khan က၏အရပျ၌ရုံးခေါ်သွားတယ်။
1995 ခုနှစ်တွင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအတွက်ဘူတိုဖြုတ်ချဖို့စွပ်စွဲပူးပေါင်းကြံစည်မှုထိတွေ့, နှင့်ခေါင်းဆောင်များကြိုးစားခဲ့နှစ်ယောက်ဆယ်ဖို့နှစ်ပေါင်းစာကြောင်းများအတွက်အကျဉ်းချခဲ့သည်။ လေ့လာသူအချို့ကအဆိုပါ putative အာဏာသိမ်းမှုရိုးရှင်းစွာဘနာဇီယာသူမ၏ပြိုင်ဘက်တချို့၏စစ်ရေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်အဘို့အကာဆင်ခြေခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူမအန္တရာယ်၏ပထမဦးဆုံးလက်အသိပညာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုမိမိအဘ၏ကံကြမ္မာကိုစဉ်းစား, ရှိုးနိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဖြစ်ဆိုးရာချိရဲများသေလွန်သောသူတို့သည်ဘနာဇီယာရဲ့ကျန်ရစ်သူညီအစ်ကိုချင်း, Mir Ghulam Murtaza ဘူတိုပစ်ခတ်တဲ့အခါမှာစက်တင်ဘာလ 20, 1996 ပေါ်တွင်တစ်ချိန်ကပိုဘူတိုလုပ်ကြံလေ၏။ Murtaza သည်သူ၏လုပ်ကြံခံရအကြောင်းကိုပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီဖြစ်စေခဲ့သည်ရသောဘနာဇီယာ၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူကောင်းစွာလျှောက်ရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခဲ့သည်။ တောင်မှဘနာဇီယာဘူတိုရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိခင် Murtaza ရဲ့သေစေ၏ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းကစွပ်စွဲထားသည်။
1997 ခုနှစ်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်ဘနာဇီယာဘူတိုကသူထောက်ခံခဲ့သောသမ္မတဦးသိန်းစိန် Leghari, အသုံးပြုပုံတခါပိုပြီးရုံးကနေဒီအချိန်ပယ်ချခံခဲ့ရသည်။ တနည်းကား, သူမအကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်, သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Asif Ali Zardari လည်းပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ Leghari သတင်းများအရစုံတွဲ Murtaza ဘူတိုလုပ်ကြံခံရ်ပတ်သက်နေခဲ့ယုံကြည်သည်။
ဘနာဇီယာဘူတို 1997 ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများအတွက်မတ်တပ်ရပ်ပေမယ့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်းသူမ၏ခင်ပွန်းဖို့ကြိုးစားနေဖမ်းဆီးခဲ့ ဒူဘိုင်း နှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအတွက်ရုံးတင်စစ်ဆေးသွားလေ၏။ ထောင်ထဲမှာနေစဉ်, ဇာဒါရီဟာပါလီမန်ထိုင်ခုံအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
1999 ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော့ဘနာဇီယာဘူတိုနှင့် Asif Ali Zardari နှစ်ဦးစလုံးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်နှင့် $ 8.6 သန်းကိုအမေရိကန်တစ်ဦးချင်းစီဒဏ်ရိုက်ခံခဲ့ရသည်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးထောင်ထဲမှာငါးနှစ်ထောင်ဒဏ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဘူတိုပြန်ပါကစ္စတန်မှသူမ၏လွှဲအပ်ငြင်းဆန်နိုင်အောင်သာဇာဒါရီကသူ့ဝါကျတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ဒူဘိုင်းရှိပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည်။ 2004 ခုနှစ်တွင်, သူ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြီးနောက်သူဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပရောက်သူ၏ဇနီးနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 5, 2007 တွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှင့်သမ္မတပါဗက်ဇ်မူရှာရက်ဖ်သူမ၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှုယုံကြည်မှုများအပေါငျးတို့သထံမှဘနာဇီယာဘူတိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပတ်အကြာတွင်ဘူတိုသည် 2008 ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မှပါကစ္စတန်သို့ပြန်သွား၏။ သူမကရာချိမှာဆင်းသက်သောနေ့ရက်တွင်တစ်ဦးသေခံဗုံးခွဲသမား 136 ဦးသေဆုံးကာ 450 ဦးဒဏ်ရာရရှိကောင်းစွာ wishers ကဝိုင်းသူမ၏ယာဉ်တန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့; ဘူတိုထိခိုကျဒဏျရာမရှိဘဲလွတ်ရ၏။
တုန့်ပြန်မှာတော့မူရှာရက်ဖ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်ဘူတိုဟာကြေငြာဝေဖန်ပြီးအာဏာရှင်မူရှာရက်ဖ်ကိုခေါ်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ငါးရက်အကြာမှာဘနာဇီယာဘူတိုအရေးပေါ်အခြေအနေပြည်နယ်ဆန့်ကျင်သူမ၏ထောက်ခံသူများတဲ့အတွက်မနေ့တုန်းကထံမှသူမ၏ကာကွယ်တားဆီးဖို့နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားခဲ့သည်။
ဘူတိုကိုအောက်ပါနေ့ကဖမ်းဆီးအိမျမှလွတ်မြောက်လာပေမယ့်အရေးပေါ်အခြေအနေဒီအတောအတွင်းမှာဒီဇင်ဘာလ 16, 2007 သည်အထိအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ကျန်ရစ်, သို့သော်, မူရှာရက်ဖ်ဟာအရပ်သားအဖြစ်အုပ်ချုပ်ဖို့ကသူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတည်ပြု, စစ်တပ်အတွက်အထွေထွေအဖြစ်သူ၏ post ကိုအပ်ခဲ့သည် ။
ဒီဇင်ဘာလ 27, 2007 တွင်ဘူတို Rawalpindi အတွက် Liaquat အမျိုးသား Bagh အဖြစ်လူသိများပန်းခြံတစ်ခုရွေးကောက်ပွဲကိုချီတက်ပွဲမှာထင်ရှား၏။ သူမသည်ချီတက်ပွဲထွက်ခွာခဲ့သည်နှင့်အမျှသူမ၏ SUV ကားများနေပေါက်မှတဆင့်ထောက်ခံသူရန်ချီလွှဲမှတက်ရပ်နေကြ၏။ တစ်ဦးကသေနတ်သမားသူမ၏သုံးကြိမ်ပစ်ခတ်, ပြီးတော့ပေါက်ကွဲအားလုံးယာဉ်န်းကျင်ကိုချွတ်သွားလေ၏။
နှစ်ဆယ်သောလူမြင်ကွင်းပေါ်တွင်အသေခံရ၏ ဘနာဇီယာဘူတိုတစ်နာရီခန့်အကြာတွင်ဆေးရုံမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ သေမင်း၏သူမ၏အကြောင်းရင်းမှာသေနတ်ဒဏ်ရာများမဟုတ်ဘဲတုံးအင်အားသုံးခေါင်းကိုစိတ်ဒဏ်ရာမရဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပေါက်ကွဲမှု၏ပေါက်ကွဲမှုကြောက်မက်ဘွယ်သောအင်အားစုနှင့်အတူနေပေါက်၏အစွန်းသို့သူမ၏ဦးခေါင်းကိုဆောခဲ့သည်။
ဘနာဇီယာဘူတိုဟာရှုပ်ထွေးမွေနောက်ကွယ်မှထွက်ခွာ, 54 နှစ်အရွယ်တွင်အနိစ္စရောက်လေ၏။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ၏စွဲချက်သူမ၏ခင်ပွန်းဆန့်ကျင်ညှိပြီးနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလုံးဝသူမ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိထဲမှာဆန့်ကျင်ဖို့ဘူတိုရဲ့အခိုင်အမာရှိနေသော်လည်း, နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်တီထွင်ခဲ့ကြသည်ဖို့မထင်ကြဘူး။ ကျနော်တို့သူမကသူမ၏အစ်ကိုရဲ့လုပ်ကြံမှုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့် Fore-အသိပညာခဲ့ရှိမရှိသိဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်သည်။
အဆုံးမှာတော့သော်လည်း, ဘယ်သူမှဘနာဇီယာဘူတိုရဲ့သတ္တိမေးခွန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ သူမနှင့်သူမ၏မိသားစုကြီးမားတဲ့ဆင်းရဲခံခြင်း, ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်သမျှသူမ၏အမှားသူမကစစ်မှန်စွာပါကစ္စတန်၏သာမန်လူတို့အဘို့ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ကွိုးစားခဲ့ပေ။
အာရှအာဏာအတွက်အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၏ဤစာရင်းတွင်တွေ့မြင် ပြည်နယ်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ။
ဗဟာဒူး, Kalim ။ ပါကစ္စတန်ရှိဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်: အကျပ်အတည်းများကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနှင့်ပဋိပက္ခများ, နယူးဒေလီ: har-Anand ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း, 1998 ။
"နာရေးကျွောငွာ: ဘနာဇီယာဘူတို," BBC News,, ဒီဇင်ဘာ 27, 2007 ။
ဘူတို, ဘနာဇီယာ။ Destiny ၏သမီး: တစ်ခုကကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ, 2nd ed, နယူးယောက်: ။ Harper ကို Collins, 2008 ။
ဘူတို, ဘနာဇီယာ။ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး: အစ္စလာမ်ဘာသာ, ဒီမိုကရေစီနှင့်အနောက်, နယူးယောက်: Harper ကို Collins, 2008 ။
Englar, မာရိ။ ဘနာဇီယာဘူတို: ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်လှုပ်ရှားသူ, Minneapolis, MN: Compass Point သို့စာအုပ်များ, 2006 ။
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး Timeline ကို: 1789 - 91
ပုန်တုပွညျဘုရင် Mithridates - ရောမ၏မိတ်ဆွေနှင့်ရန်သူ
တစ်ဦးသို့ပြန်သွားရန် Issue ရုပ်ပြကဘာလဲ?
ထိပ်တန်း 10 ကမ္ဘာမြေ Mystery
အားကောင်းအောင်ကျက်သရေရှိရှိဆင်း slope သွားခြင်း
အဆိုပါ Carter ကမိသားစုသစ်ပင်
'' သင်ကဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းကလေးရာကဘာလဲယုံကြမည်မဟုတ်! ' ဗီဒီယိုကိုလိမ်လည်မှု
အခ်ါများနှင့်တူရိယာဆိုင်ရာ Value ကို
ကာကွယ်ရေးအဆုံး Play လုပ်နည်း
အီတလီကြိယာ conjugation: Rider
အကြှနျုပျ၏အိမျထဲမှာအဲဒီ Tiny နီချို့ယွင်းမှုများဘာတွေလဲ?
Excel ကို VBA အတွက် Row copy
ငါဘယ်လိုဖြစ်ရပ်မှန်၏အဆင့်အတန်းတွင် Check သလား?
တစ်ဦး Guillotined တစ်ဦးချင်း၏ဦးခေါငျးတိုချုပ်အသကျရှငျနကွေပါသလော
မာယာလင်း။ အဆိုပါဗိသုကာ, ပန်းပုဆရာနှင့်အဆိုတော်
Step-by-အဆင့်ဓါတ်ပုံများတစ် Bowline ထုံးတုပ်နှောင်ဖို့သင်ယူခြင်းများအတွက်
Juz '1 ကုရ်အာန်၏